A na-akpọkwa MH ECO Polyester Sewing Thread dị ka eriri polyester a na-eji ejiji, jiri yarn pụrụ iche nke ejiri karama plastic mee nke nwere usoro mgbagwoju anya, a na-emegharị 100%, ezubere iji nyere aka na-ezute ihe ịma aka ahụ, nke imepụta gburugburu ebe obibi.
Spec: Anyị nwere 20S / 2,20S / 3,30S / 2,40S / 2,60S / 2, bụ echiche maka uwe eji egwuri egwu, akwa egwuregwu, uwe na-akpachi anya, uwe na-acha uhie uhie, ngwa eji achọ mma na n'èzí.
akwụkwọ: Standard Recycled Standard (GRS) 4.0
100% post n'ji recycled polyester eriri, Polyester eriri gbaara site GRS (Global Recycling Standard), Ezigbo akọrọ okpomọkụ shrinkage ngwọta na-, budata dịkwuo ahịa profitability, Ezigbo ịkwa akwa mmetụta, Ezigbo agba ngwa ngwa.
MH ECO Polyester Sewing string na-enye uzo ozo eji echichi n’enweghi ahochita nke oma. Iji MH ECO Polyester Sewing string, na protext ụwa ọnụ!
100% Recycle Eco Polyester Sewing string